Dowlada Kenya oo jawaab ka bixisey dalabkii Xukuumada Somaliya ee. – Kismaayo24 News Agency
Dowlada Kenya oo jawaab ka bixisey dalabkii Xukuumada Somaliya ee.
by admin 9th February 2020 0175
Dowladda Kenya ayaa markii ugu horreysay ka hadashay arrinta wasiirka amniga Jubbaland, Cabdirashiid Janan iyo dalabkii dowladda federaalka ee ku aadanaa inay u soo gacan geliso, si loo maxkamadeeyo gudaha dalka.
“Arintani gacanteenna kuma jirto, waxaan kugula talinayaa inaad la xiriirto kuwa laga yaabo inay wax ka og Yihiin, waana ciidamada amniga”.yauu yiri Mr. Kamau.
Wasiir Goodax oo fariin u diray qaar ka mid ah ardayda Maamulka Puntland.
Kenya oo ka hadashay Dagaalki ay shalay ku qabsatay Jaziirada Kudhaa
admin 23rd March 2015 27th August 2015
DEGDEG WAR CUSUB WARKII HORE WAR SOO DHAAF: Ciidamada ammaanka oo gudaha u galay guriga Senatar Cabdi Qeybdiid.
gurey 30th December 2017